रहस्यमै कलंकी गोलीकाण्ड: सेनाले बोक्ने हतियारबाट कसले चलाएको थियो गोली?
नारायण अधिकारी मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७, २०:२६
काठमाडौं– हाइड्रो इन्जिनियर डा विष्णु शर्मा नेपालको कलंकीस्थित घरमा गोली चलेको एक वर्ष बितिसक्यो। २०७६ साउन १४ गते राति सबा ८ बजे शर्माको घरको माथिल्लो तलाको झ्यालबाट गोली कोठाभित्र छिरेको थियो।
कोठामा गोली छिरे पनि त्यसबाट कुनै मानवीय क्षति भने भएको थिएन। शर्माले त्यसबेला भनेका थिए, ‘गोली झ्यालको सिसा छेड्दै ग्रिलमा ठोक्किएर शक्तिहीन भएपछि कोठाभित्र प्रवेश गरेको थियो। जसकारण कुनै मानवीय क्षति भएन।’
कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने शर्माकी छोरी गोली चलेको बेला कोठामै थिइन्।
गोली चलेपछि शर्माले फेसबुकमा स्ट्याटस समेत लेखेका थिए, ‘कसैले टार्गेट गरेर मार्ने उद्देश्यले नै हानेको गोली हो, यसमा कसैको दुईमत छैन। ग्रिलमा लागेर शक्ति क्षीण भैसकेपछि मात्र जाली छेड्दै घरभित्र पसेकोले मानवीय क्षति हुनबाट बालबाल बाँचियो।’
उनले यो स्टाटस लेखेको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत उक्त गोली काण्ड भने अझै रहस्यमै छ। विभिन्न पाटाबाट अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले बताए पनि उक्त काण्डको गुत्थी अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन।
राजधानीमै गोली चलेको खबर बाहिरिएपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोली लगत्तै घटनास्थल पुगेको थियो।
झ्यालको सिसा उघारेर छेस्किनी लगाएको अवस्थामा गोली सिसा छेड्दै झ्यालको चौकसमा लाग्दै कोठाभित्र छिरेको निष्कर्ष त्यसबेला अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले निकालेका थिए।
उक्त झ्यालबाट गोलीभित्र प्रवेश गर्न शर्माकै छिमेकी शोभाकर खनालको घरबाट गोली हानेको हुनसक्ने प्रहरीले आशंका गरेको थियो। प्रहरीले आशंका गर्नु र शर्मा र खनालको बोलचाल बन्द हुनुले समेत अनुसन्धान नजिक पुगेको प्रहरीले विश्लेषण गरेको थियो।
अझ सोही राति उनको घर खानतलासी गर्दा १२ बोर र २२ बोरको दुई थान राइफल र ५० थान गोली फेला पर्नुले अनुसन्धान सफल नजिक पुगेको विश्लेषण प्रहरीको थियो। सो क्रममा खनालको घरबाट गोली प्रहार हुनसक्ने ठाउँ र घटनास्थलको दूरी समेत प्रहरीले नाप्दा १६.२३ मिटरको टाढा भएको पाइएको थियो। ‘यति नजिकैको दूरीबाट ४५ डिग्रीको कोणमा गोली प्रहार गरेपछि खोका भेटिएको ठाउँमा गोली पुग्न सक्छ’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले विश्लेषण गरेका थिए।
तर ती हतियार लाइसेन्स लिएर राखिएको हुनु र बरामद हतियारबाट गोली नचलेको विधि विज्ञानले रिपोर्ट दिएपछि भने प्रहरी अनुसन्धान शून्यमा झर्‍यो। अहिले पनि प्रहरी अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ।
प्रहरीको विधि विज्ञानको रिपोर्ट: एम–१६ र इन्सासमध्ये एकको गोली
प्रहरीले खनालको घरबाट बरामद हतियार र घटनास्थमा भेटिएको गोलीको खोका त्यसबेला परीक्षण गर्न विधि विज्ञानको रिपोर्टले बरामद हतियारबाट उक्त गोली नचलेको देखाएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार उक्त गोली एम–१६ र इन्सासमध्ये एकबाट चलेको उल्लेख थियो। यी दुवै हतियार नेपाली सेनासँग मात्रै छ।
सेनासँग मात्रै भएको हतियाबाट कसरी गोली चल्यो विषय भने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। ‘विधि विज्ञानले सेनासँग मात्रै भएको हतियारबाट गोली चलेको देखाउँछ। त्यसपछि त अनुसन्धान झनै पेचिलो बन्यो। यसबारे सेनासँग अनौचारिक रुपमा पनि बुझियो तर कुनै क्लु फेला परेन’, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
यो हतियारको रेञ्ज क्षमता ५ सय ५० मिटर प्वाइन्ट टार्गेट हो भने ८ सय मिटरसम्म एरिया टार्गेटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ३६ सय मिटरसम्म यसले मार हान्न सक्छ।
एम—१६ बाट त्यति नजिकैबाट गोली चलाएको त्यसको क्षति ठूलो हुनुपर्ने तर त्यहाँ सिसामात्रै फुटेकाले गोली टाढाबाट चलेको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका थियो।
ठूलो क्षति नभएकाले शोभाकरको घरबाटै गोली नचलेको निष्कर्षमा प्रहरी त्यसबेलै पुगेको हो। त्यसो भए कहाँबाट चल्यो त गोली? यो प्रश्नको जवाफ प्रहरीले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन।
कुरो संसदसम्म उठ्यो, घटना शंकास्पद देखिएपछि फाइल बन्द
उक्त गोलीका काण्डको कुरा त्यसबेला संसदसम्म पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले गोलीकाण्डबारे त्यसबेला संसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कलंकी क्षेत्रकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि संसदको शून्य समयमा यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेकी थिइन्।
तर पीडित भनिएका व्यक्तिले आरोपमा लगाएको व्यक्तिको घरबाट र उनको हतियारबाट गोली नचलेको पाइएपछि घटना शंकास्पद देखिएको थियो। अझ अनुसन्धानको क्रममा घटना बनावटी देखिएपछि नयाँ ट्वीस्ट आएको र यसको अनुसन्धान अघि बढ्नै नसकेको बताउँछन्।
तर महानरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली भने उक्त प्रकरण अनुसन्धानमै रहेको बताउँछन्।
प्रहरीले अनुसन्धानमै रहेको बताए पनि सडकदेखि संसदसम्म पुगेको यो गोलीकाण्ड भने अझै रहस्यमय नै छ। गोली चलेको भन्नु तर वरपर सोधपुछ गर्ला भने कसैले पनि आवाज नसुन्नु, सेनासँग मात्रै हुने हतियारबाट गोली चलेको रिपोर्ट आउनु, वरपर सेनाको ब्यारेक नहुनु, ठूलो क्षति हुनसक्ने हतियारबाट गोली चलेको रिपोर्ट आए पनि क्षति न्यून हुनुले घटना बनावटी रहेको देखिएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए।